Home Wararka Qoor Qoor oo xulida CC ku xalaaleeyay boobkii iyo musuqii ka dhacay...
Qoor Qoor oo xulida CC ku xalaaleeyay boobkii iyo musuqii ka dhacay dhuusamareeb
Xulida la soo xulay Cabdiraxman Cabdishakur ayaa waxa ay soo afjartay doodii ay ku doodayeen xubnaha Midiwga Musharaxiinta ay ku tilmaamayeen in waxa ka socda dalka ayan ahayn doorasho balse ay tahay boob.
Farmaajo iyo kooxaha la shaqeysta oo caan ku ah sida loo qobjabiyo qofka ay doonayaa inay baa’biyaan ayaa waxa ay xulida Cabdiraxaman Cabdishakur u isticmaaleen inay ku qobjabiyaan Midowga Mushaxaiinta iyo Cabdiraxam Cabdishakur.
Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor oo taa ka duulaya ayaa ayaa kulan isugu keenay qaar kamida xildhibaanada dhawaan la dooraty ee lagu eedeynayay dilka ka dhacay dalka iyo Cabdiraxamaan Cabdishakur.
Ujeedka kulanka ayaa lagu sheegay Qoraal kasoo baxay Madaxtooyada Dowlad Goboleedka Galmudug in uu ahaa is cafin. Waxaana loo qaybiyay baxda saaxaafadda sawiro ku ssaabsan kulankaas.
Qoor Qoor ayaa yiri ” kuwii beenta iga sheegay ee ahaa in aan doorasho xalaala ka dhicin Dhuusamareeb, sow meel cidla ah kuma soo dhicin..adeer doorasho xalaal ah ayaa qabanay”
Previous articleXasan Cali Kheyre oo Nairobi kula kulmay diblomaasiyiin Ruush ah
Next articleWaa maxay sababta kursiga uu ku tartamayay Fahad Yaasin dib loogu dhigayo?
[Deg Deg] Janan & Fahad Yasin oo Muqdisho soo gaaray